Indlela yokwenza amakhandlela: ezona ngcebiso zibalaseleyo kunye namaqhinga | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Indlela yokwenza amakhandlela
Siyazi ukuba kumhombiso, amakhandlela umbono olungileyo. Ingakumbi ukuba zinencasa. Banenkangeleko ebonakalayo yokuhombisa kunye nokudibanisa indibaniselwano eyahlukeneyo enokubakho. Ungayiguqula indawo ibe yindawo yokwamkela ngakumbi kwaye wenze isitayile esikufanelayo. Kukho abantu abafuna ukufunda indlela yokwenza amakhandlela ngendlela elula nesebenzayo.
Ke ngoko, siza kulinikela eli nqaku ukuba likuxelele inyathelo ngenyathelo indlela yokwenza amakhandlela kunye neempawu zawo.
1 Amakhandlela anevumba elimnandi
2 Ukwenza amakhandlela ekhaya
3 Indlela yokwenza amakhandlela inyathelo ngenyathelo
4 Khu seleko
Amakhandlela anevumba elimnandi anevumba elifudumeleyo, lo ngumahluko phakathi kwesithuba esihonjiswe kakuhle kunye nekhaya elifudumeleyo, elinobubele. Ngabo, sinokuguqula nayiphi na indawo ukuba ibe yindawo yokuphumla neyomlingo, evusa amanye amaxesha kunye neendawo. Ngesi sizathu, amakhandlela anevumba elimnandi abeyenye into ekuhombiseni kwethu kwaye asisipho esigqibeleleyo sokusinika ngeKrisimesi okanye nangaliphi na elinye ixesha lonyaka.
Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto: Amakhandlela nawo aluphawu lokuhlaziya, ukukhanyisela nokucoca. Kungenxa yoko le nto zisetyenziswa rhoqo kwizithethe ezahlukeneyo zokuziphatha kwihlabathi liphela kangangokuba zisetyenziselwa ukukhuthaza ukucamngca okanye ukwenza imeko ecebisayo nenothando. Ukongeza, kuxhomekeka kwivumba labo elimnandi, banokuba namandla, ukunciphisa amandla, ukuphumla okanye ukukhuthaza kuthi, kunye nokwenza ngcono iimvakalelo ezithile.
Imbali yamakhandlela ibuyela umva ekuqaleni kwempucuko yokuqala. Ukusuka kumakhandlela eoyile yamaRoma ukuya kwezinye izinto ezintle ezenziwe ngomthi omde, izicatshulwa zezityalo, okanye amaJiphutha asebenzisa amasebe anodaka weenkomo okanye imvana. Kuzo zonke ezi nkcubeko, Yeyona ndlela iphambili yokukhanyisa kwaye ikwasetyenziswa kwiminyhadala yenkolo nakwimibingelelo.
Ubukho bayo njengophawu lweKrisimesi bukwanembali yamakhulu eminyaka. Amakhandlela asetyenziselwa ukugxotha imimoya emdaka kwaye ngokuthe ngcembe iba yenye yezinto eziqhelekileyo kwezi holide. Ngapha koko, kukho ubungqina bokuba ngenkulungwane ye-XNUMX amakhandlela abekwa kwimithi yeKrisimesi yaseJamani ukuhombisa igumbi.
Ukuqala kokufunyanwa kweoyile ngo-1850, amakhandlela ayenziwe ngeparafiniKamva, xa kufika iparafini nombane emakhayeni ethu, yonke into yatshintsha. Yile ndlela ikhandlela lithatha ngayo i-grail engcwele yokuhombisa kunye nevumba elimnandi, hayi isixhobo sokukhanyisa kuphela.
Ukwenza amakhandlela ekhaya
Ukuba umlingo wamakhandlela nawo uyakuthanda, sele uyazi ukuba kukho amawakawaka eemodeli ezahlukeneyo, iimilo, ubungakanani kunye nemibala kwintengiso. Nangona kunjalo, zinokwenziwa ekhaya, kwaye ziluncedo olulula kunye nolwasekuqaleni olugqibeleleyo njengesipho. Makhe sibone ukuba zeziphi izinto eziyimfuneko ezifunekayo ukuze ufunde indlela yokwenza amakhandlela:
I-wax ecocekileyo okanye i-parafini wax (Ungayifumana kwiivenkile zobugcisa okanye kwi-Intanethi.) Ixabiso lixhomekeke kwikhandlela ofuna ukulwenza kunye nobukhulu balo.
Umbala, ithoni oyikhethile.
Ubunye okanye nangaphezulu ukubumba amakhandlela akho.
Ubume obumnandi. Ungasebenzisa iioyile ezifanelekileyo, kodwa qiniseka ukuba zikumgangatho osezantsi kungenjalo awuyi kufumana ziphumo zihle.
Ingqayi ye-wax enyibilikiweyo intonga yesikhokelo (nazo zithengiswa kwi-intanethi nakwiivenkile ezizodwa), ispatula somthi kunye nomsonto (isixa sixhomekeke kwikhandlela ofuna ukusenza).
Indlela yokwenza amakhandlela inyathelo ngenyathelo
Kuthatha ixesha ukuba ufunde ukwenza amakhandlela anevumba elimnandi, kodwa ayintsonkothanga. Qiniseka nje ukuba ulandele la manyathelo angezantsi:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukushushubeza i-wax epanini, ngaphezulu kobushushu obuphakathi okanye obuphantsi, kude kube kunyibilike kakuhle. Umbono olungileyo kukwenza kwindawo yokuhlambela amanzi (beka isikhongozeli nge-wax kwimbiza enkulu) kwaye unyanzele nge-spatula.
Ke xa i-wax sele selehlile kancinane, yongeza umbala wokutya kunye namaconsi ambalwa okhetho lwakho oluthandayo. Lumka ungagqithisi, kungenjalo ivumba olikhuphileyo liya kuba namandla kwaye licaphukise.
Emva koko, lixesha lokuba uyilolonge: galela i-wax enyibilikiweyo, enencasa kunye enemibala kumbumba owukhethileyo (kuqala, ungalibali ukuthambisa ezantsi kunye namacala omngundo ngethontsi leoyile yokupheka).
Ke qhagamshela i-wick kwikhandlela kwaye ubophe isiphelo sekhandlela kwintonga yesikhokelo. Uya kubona umngxunya entongeni apho ungangena khona kwi-wick kwaye uyidlulisele kwelinye icala lobumba. Ezinye iintambo ziza nesiseko esithe tyaba sokulungiswa ngokulula kumakhandlela ethu, ngakumbi ukuba sifuna ukuwafaka kwisitya.
Ekugqibeleni, usike incam yomsonto, uqiniseke ukuba ushiya isiqwenga ngaphezulu ukuze ukwazi ukusivula ngaphandle kweengxaki.
Lixesha lokuba i-wax ipholile, le nkqubo ingathatha iiyure ezininzi. Ukunciphisa ixesha lokulinda, kufuneka zibekwe kwindawo epholileyo, emnyama kude nelanga.
Ukuba ufuna ukukhupha amakhandlela (umzekelo, unokukhetha ukuwashiya kwiglasi okanye kwiijagi zekheram), uzibuyisele kwisikhunta uze ucofe ngeminwe yakho okanye ngepensile ukususa kancinci umoya kwaye ukwenze ngokuthe ngcembe. ngaphandle kwesikhunta, oku kuthintela ikhandlela ukuba lingaphuli okanye laphule.
Ukwenza amakhandlela ekhaya akusoloko kubangela ingozi enkulu, kodwa kufuneka sikhumbule ukuba sisebenzisa iparafini, eyimveliso enokutsha, nje ukuba ibe lulwelo, iya kufikelela kubushushu obuphezulu kakhulu. Ke ngoko, kuhlala kucetyiswa ukuba ulandele la manyathelo alandelayo:
Kuyacetyiswa ukunxiba iigloves zokukhusela kunye neiglasi.
Ungaze ushiye umlilo ungakhuselekanga.
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe ithemometha yasekhitshini ukuqinisekisa ukuba asidluli kumda wokutsha nangaliphi na ixesha.
Ukuba i-wax ibamba umlilo, vala ipani ngelaphu kwaye ucime igesi. Sukongeza amanzi phantsi kwayo nayiphi na imeko, kuba oku kuyakukhuthaza kuphela amadangatye.
Okokugqibela, ncamathela kwizixhobo obuzisebenzisa ukwenza amakhandlela. Akukho meko uyabaxuba kunye nokutya okuphekiweyo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokwenza amakhandlela inyathelo ngenyathelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa kwakhona » Indlela yokwenza amakhandlela
Amandla ahlaziyekayo kunye nengahlaziyekiyo
Izinto eziphilayo zaselwandle